Kulanku wuxuu fududeeyaa kulanka u dhexeeya dadka | Abuurista khadka tooska ah
Kulanku wuxuu fududeynayaa la kulanka dadka
Qaab aad u kooban, ayaa la dhihi karaa Meetup waa goob u heellan fududeynta kulanka u dhexeeya dadka doonaya inay wax sahamiyaan, ogaadaan iyo / ama wax bartaanMarka haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah oo aad rabto inaad waxyaabo cusub ka barato naqshadeeyayaasha kale, kani waa bartaada.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, qodobkan ayaan ku tusi doonaa afar waji oo umuuqda mid sahlan ku saabsan boggan cajiibka ah waana taasi gudaha La kulan wax walba waad heleysaa
Kulanku wuxuu kuu keenayaa wax kasta oo ka imanaya isboortiga illaa filimada, farshaxanka, qoob ka ciyaarka iyo waxyaabo kale oo badan. Boggan ma xadidno adeegsadayaasheeda marka loo eego qaybaha, maaddaama ay runti suurtagal tahay in la helo qaybo badan oo habboon dadka leh dookhyo iyo dano kala duwan.
Uma baahnid inaad noqotid khabiir, maxaa yeelay si dhib yar ama dhif ah, dhacdo ayaa dhici doonta kaliya fasal xirfadeed gaar ah ama helitaankiisu waxay ku xirnaan doontaa helitaanka nooc tababar ah. Guud ahaan, dhacdooyinkan badankood waxay u furan yihiin qof kasta oo doonaya dhageyso, ka doodo oo wax barto in yar oo dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca laga hadlayo.
Kulanku wuxuu shaandheeyaa dhacdooyinkaas kuwa dhow, sidaa darteed kooxo iyo dhacdooyin badan ayaa laga yaabaa inay ku yaalliin meel aan aad loo heli karin. Si kastaba ha noqotee, tani kaama hor istaageyso inaad ka mid noqoto iyo kaqeybgal doodaha kadhaca golayaasha oo xitaa laxiriir xubnaha qaar si fikradaha la is dhaafsado.
Marka laga reebo taas beddelka ah, Meetup sidoo kale ayaa daryeela shaandhee dhacdooyinka dhow meesha aad joogto, si ay kuugu fududaato inaad ka soo qaybgasho midkoodna.
Sidoo kale waad abuuri kartaa kooxahaaga, sidaa darteed haddii aad hayso wax fikrad ah, waxaad dooneysaa inaad la kulanto shaqaalaha qaarkood si aad ugala hadasho mowduuc gaar ah ama haddii aad rabto inaad soo ururiso dhowr qof si ay uga qabtaan nooc ka mid ah shaqada bulshada dhexdeeda, horayba maahan inaad sugto ilaa kooxda ugufiican ay soo muuqatoMaaddaama aad fursad u leedahay inaad abuurto kooxo kuu gaar ah iyo shirarka ay qaban doonaan, si tartiib tartiib aad u noqotid wax ka badan oo keliya ka-qaybgale, waxaad noqon kartaa qabanqaabiyaha.
Kulanku wuxuu leeyahay waxyaabo wanaagsan oo keliya, maadaama aad dadka la kulmi doontid, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waxyaabo aadan aqoon, waxaad awood u yeelan doontaa inaad barato waxyaabo aysan dadka kale aqoonin iyo xitaa waa bedel fiican marka ay timaado helitaanka mashaariic shaqo in la sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Kulanku wuxuu fududeynayaa la kulanka dadka
10 sifooyin oo aad ugu baahan tahay inaad ku shaqeyso sidii shirkad xor ah